Ujyaalo Sandesh | » पेट्रोल प्रतिलिटर ५२ रूपियाँमा किनेर उपभोक्तालाई ११० रूपियाँमा बेचिन्छ ! पेट्रोल प्रतिलिटर ५२ रूपियाँमा किनेर उपभोक्तालाई ११० रूपियाँमा बेचिन्छ ! – Ujyaalo Sandesh
पेट्रोल प्रतिलिटर ५२ रूपियाँमा किनेर उपभोक्तालाई ११० रूपियाँमा बेचिन्छ !
काठमाडौँ, २७ माघ । नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग पेट्रोल प्रतिलिटर ५२ रुपियाँमा किन्छ तर उपभोक्तालाई प्रति लिटर ११० रुपियाँमा बेच्छ ।